Isithombe – Isigaba – Android – Vessoft
Isithombe – Android
Isithombe Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukuhlala kwelinye avakashelwa zokuxhumana nabantu emhlabeni. Isicelo iqukethe eziningi imiphumela graphic nokuhlunga for umsebenzi ngempumelelo ngezithombe.
Isithombe Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukuphatha ingosi yokuxhumana okuyinto kuthambekele emsebenzini amaqoqo izithombe ezahlukene nezithombe. Isofthiwe eziningi izilungiselelo for the control elula a yosebenzisayo.
Isithombe Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukuze ulayishe izithombe ezahlukene kanye GIF-izithombe zisetshenziselwe ukuba ngezamaphoyisa ethandwa. Isofthiwe kwenza ukubeka ukuthandwa futhi baphawule izikhala.